Tallahassee, FL • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Aza mankaleo ao Tallahassee, FL. Fandriho ny otra ara-nofo nataonao.
Tallahassee dia renivohitry ny fanjakan'i Etazonia Florida. Io no sezan'ny distrika ary ao amin'ny County Leon ihany no misy azy. Tallahassee dia lasa renivohitr'i Florida, avy eo dia ny faritanin'i Florida, tamin'ny 1824. Tamin'ny 2018, ny isan'ny mponina dia 193,551, ka nahatonga azy io ho tanàna faha-7 lehibe indrindra tao amin'ny fanjakan'ny Florida tany Etazonia, ary ilay tanàna faha-126 lehibe indrindra tany Etazonia. Ny isan'ny mponina ao amin'ny tanànan'i Tallahassee dia 385,145 tamin'ny taona 2018. Aza mankaleo Tallahassee, FL. Mamandrika ny fanorana ara-nofo.